कसरी भयो शर्मिलाको हत्या ?(भिडियो हेर्नुहोस्) « Janata Samachar
कसरी भयो शर्मिलाको हत्या ?(भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति :4March, 2018 2:01 pm
काठमाडौं । सधै झै गत शुक्रवार पनि बिहान नौ बजे घरबाट निस्किन् शर्मिला राउत । अरु बेला कार्यालयको काम सकाएर समयमै घर पुग्ने छोरी बेलुकाको नौ बज्दा पनि घर नफर्केपछि परिवारका सदस्य चिन्तित थिए । तर त्यही समयमा छोरीको फोन आयो ।
शर्मिलाले फोनमा आमासंग कुरा गर्दै भनिन् आमा म आज आउन सक्दिन । हाम्रो बोसको पार्टी छ, यतै बस्छु, चिन्ता नलिनु । छोरीको फोनपछि परिवारजन आश्वस्त भए ।
भोलिपल्ट अर्थात् २०७४ साल शनिवार बिहान १० वजे छोरी कै मोवाईलवाट कल आयो । शर्मिलाकी आमाले फोन उठाईन् । तर यस पटक उतावाट बोल्ने मान्छे शर्मिला थिईनन् । बोल्ने मान्छे प्रहरी थिए ।
प्रहरीले भन्यो तपाईहरु छिट्टै सुन्धारास्थित निकुद होटलमा आउनुस् । यहाँ शर्मिलाको सानो दुर्घटना भएको छ । शर्मिलाको आमा बुवा दौडेर सुन्धारा पुगे । प्रहरीले उनीहरुलाई होटलको १०४ नं. कोठामा पु¥यायो । जहाँ ओछ्यानमा छोरी शर्मिलाको लाश लमतन्न थियो ।
प्रहरीको मुखवाट उनीहरूले सुने, तपाईको छोरी मृत अवस्थामा भेटेका हौ । प्रहरीको मुखबाट निस्केको वाक्य सुन्ने वित्तिकै उनीहरू अचेत हुनु स्वभाविक नै थियो । छोरी शर्मिलालाई लाडप्यारमा जो उनीहरूले राखेका थिए ।
थप भिडियो हेर्नुहोस्ः